fanontaniana FSX 747
1 taona 5 volana lasa izay #1033 by lpklem
Alohan'ny hanombohako, kudos amin'ny Air Force One 747-8I add-on, dia ny fiaramanidina fanampiny tafiditra ao anatin'ny fanontaniana roa ho an'ny vondrona:
1) Nanao ahoana ny fametrahako ny bokotra jiro (ny trigger) mba hananana ny mpanatonta AF1 mpamadika ahy saingy tsy afaka ny hahazo ny trondro rehetra 4 mba hivezivezy indray mandeha indray mandeha? Raha tsy izany dia mahazo ny minitra 10 farafahakeliny aho, fa tsy manampy betsaka amin'ny pistol 6'000ft grrrrr
2) Manana rafitra fanaraha-maso anankiroa aho, ny main-monitor dia manana ny ordinatera VC sns, ny faharoa ampiasako amin'ny fomba fiasa Instrument, dia mila fotoana kely hananganana isaky ny hilalao aho, efa nanandrana nanavotra ny sidina indray mandeha aho fa manao izany Aza mamonjy ny fanorenana faharoa. Ny soso-kevitra rehetra dia ho ankasitrahana.
1 taona 5 volana lasa izay #1034 by Gh0stRider203
1 taona 5 volana lasa izay #1035 by DRCW
1 taona 5 volana lasa izay #1036 by lpklem
Izany no fomba nametrahako ny bokotra jiro hiverenana na dia averiko indray aza fa ny fihodinana mivadika dia tsy mihoatra ny 10%, ny minitra izay mampitombo ny tsindry amin'ny fampiasana ny fanamafisam-peo jiro rehefa miverina izy io dia manidy ny mamadika sy manosihosy ny mahazatra, fa tsy inona no tadiavinao amin'ny làlan-tany. Misaotra ny fampidirana anao, mankasitraka izany aho !!!!
1 taona 5 volana lasa izay #1037 by DRCW
Fotoana mamorona pejy: 0.278 segondra